Gidragidra | GAZETY_ADALADALA
Nisy maty koa tany Toliary
Posted on 12/02/2009 by gazetyavylavitra
12 febroary: Hatreto aloha dia tsy mbola feno ny vaovao azoko. Ampitaiko fotsiny aminareo izay azo ary dia fenointsika miadana eto. Nisy korontana koa tany Toliary tany ary dia nisy ny maty sy naratra. Izay ihany aloha no azoko ambara fa afaka mametraka hafatra eto izay manana vaovao momba izay. Indrindra fa ianareo any an-toerana. Iangaviako indrindramba hampiditra izay niainanareo eto ho fantatry ny maro. Misaotra mialoha.
13 febroary: araka ny tatitra voaraiko izao maraina izao dia 6no maty ary maromaro ihany ny naratra. Raha ny tatitra ihany koa dia ‘bande organisée’ no fahitàna aireto andian’olona voatifitra ireto.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: Andry RAJOELINA, emeute, Gidragidra, Marc Ravalomanana, mouvement populaire, Toilary, Tulear |	Leave a comment »
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 07 febroary 2009, Andry RAJOELINA, émeutes, Gidragidra, martyr, mouvement populaire, Ravalomanana Marc, VIVA |	40 Comments »
Gidragidra tao Mahamasina
Posted on 02/03/2008 by gazetyavylavitra
Toy izao no fandehany: Tokony hisy match nifandonan’ny AJESAIA sy ny MOZAMBICAIN teo Mahamasina androany. Nampidirina foana ny olona tao ami’ny stade. Ny adversaire efa tonga teto Tana ary Tany akaikin’ny Sabotsy Namehana tany no nanao fanazaran-tena. Ny billet anefa raisina sy rovitina ao ampidirana ny stade. Raha tamin’ny 15h ny baolina no tokony hanomboka dia efa tamin’ny 16h vao nilazana fa foana ny match fa tsy tonga ny arbitre. Tezitra ny olona ka nanomboka nimenomenona. Nidina teny ankianja namotika ny harato sy izay sendra azy.Naneho ny tsy hafaliany ny lehilahy lehibe irey ary dia niafara tamin’ny herisetra nataon’ny polisy taminy izany. Hitsakitsaka no nahazo azy. Nirongatra amin’izay ny olona nanimba zavatra sy nitaky fanazavana, satria ny vola voaloa tsy ho tafaverina intsony.. Nalaina tamin’ny ambulance tao ilay rangahy io ary heno avy eo fa maty tany amin’ny hopitaly. Ny tora-bato kosa nitohy hatrany ka ireo tany ivelany no mitoraka ny aty anatiny. Izaho amin’io narovan’ny police nentina niditra tao amin’ny stade fa na ny mpanao gazety, na ny olon-tsotra maka sary dia samy tsy zakan’ny olona ka lasibatry ny tora-bato ihany koa. Tafasaraka tamin’ny zanako roa vavy aho ary soa fa nitondra phone izy ireo. Talohan’ny nanatonako ny stade dia navelako teny akaikin’ny moron’Anosy izy ireo. Nantsoiko haningana ka nasaiko nadositra nankany Analakely . Niantso ny tany an-trano indray aho haka azy ireo avy eo. Lany anefa ny credit-ko ka tsy tafita ny hafatra. Izy roa kely amin’io efa an-dalana hamonjy an’Analakely. Soa fa niantso ahy tampoka ny anabaviko ka io no nasaiko nilaza maika tany an-trano sy nanazavako ny zavatra rehetra.
Vao maika nitombo ny hatezeran’ny olona ary tonga hatrany Analakely cinema Ritz ny gidragidra. Rehefa mety ho lalana nivoaka an’i Mahamasina dia nisy izany gidragidra izany avokoa. Tao anaty Stade dia fiara roa no naongan’ny olona ka nodorany. Tsy fantatro aloha na an’iza na an’iza ireo. Roa no olona nalefa tany amin’ny hopitaly, ka ny iray no heno (marihako tsara fa heno) fa hoe maty. Rehefa mahazo vaovao misimisy kokoa aho dia ampitaiko aminao ihany. Izay hijery ny video kosa dia afaka mijery izany any amin’ny france24 fa nalefako any. Ialako tsiny indrindra.
Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity: aiza ho aiza ny andraikitr’ireo arbitre raha nilaza ny ho avy nefa tsy tonga,? Aiza ny andraikitry ny CAF ? ary ny an’ny Federation Malgache ? Angaha tsy fantatra mialoha be hoe tsy ho avy ny arbitre? Ahoana ny amin’ny aina nafoy sy ny naratra ? sns…
TSy navela hisoka-bava tamin’izay manadihady moa ny police, fa kosa tsy afaka manakana ny mpanao gazet tsy haka sary. Soa fa mba tafiditra ho isan’ny mpanao gazety ny tena tamin’iny fa raha tsy izany dia asa fotsiny.
Ireto santionan-tsary misy hojerena fa mbola betsaka moa ny aty fa ny fotoana no tsy ampy handefasana azy.
3 ny arbitres nandrasana. Tsy tonga anefa ny comorien iray. Saiky hosoloina Malagasy mba handehanan’ny lalao. Tsy nanaiky ny Costa do Sol. Niandry ny Commissaire au match ny federasiona malagasin’ny baolina kitra tamin’ny folo. Tsy tonga anefa ileio, ary rehefa nozahana dia tany amin’ny Costa do sol no hita izy. Zavatra izay tsy tokony ho nataony velively ny manatona ekipa alohan’ny match toy izao. Tsy nanome baiko koa anefa izy hoe hisy ihany na tsia ny fihaonana. Noho izany dia naman’ny misy ny fihaonana hatramin’ny ora farany.
Taorian’ny gidragidra dia tapaka fa haverina ny Talata 04 mars amin’ny 14h 30 ny fihaonana ary ny federation no hitady ny kianja sy hanao izay hahatomombana azy. Hisy ny fanafarana mpitsara avy atsy Maorisy mba hameno ny banga ho fanampin’ireo comoriens roalahy efa eto Antananarivo.
5 naratra ka 3 mpitandro ny filaminana
2 fiara may
maro kosa ireo fiara simba sy vaky fitaratra. Anisan’ny nitondra faisana tamin’izany ny tobin’ny polisy etsy Mahamasina
Filed under: tapatapany | Tagged: AJESAIA, Fott_ball, Gidragidra, Mahamasina, Match raté |	1 Comment »